A futha Ukushisa ibekwe eduze ngangokunokwenzeka ukuze yokubhukuda uhlelo filtration. It is yenzelwa ukusetshenziswa ngaphandle iminyango kanye Akudingi isigubungelo esibi. Empeleni uma Heat Pump imbozwe ngesikhatsi operation ngeke enze kahle hle.
Akukho ukunakwa okudingwa Heat Pump njengoba nge air conditioner. Vele ukususa noma imaphi amacembe, utshani, iphepha, njll okuyinto ngezikhathi ezithile iqoqa kusukela emoyeni. I-chemistry pool kufanele ahlale olinganiselayo njalo. I grills evaporator kuthiwa camera ukuvimbela ukugqwala. Nokho uma uhlala eduze indawo usawoti-amanzi ungase ufune hose phansi ngaphandle evaporator ikhoyili ukusiza ukuvimbela Yakha up usawoti nokugqwala.
Yebo. Nokho-ke wonkhe umuntfu kweyeme etinyatselweni usayizi kwechibi isikhathi sonyaka. Ukushisa amaphampu zenziwa ukuze silondoloze pool lokushisa nsukuzonke. Uma Iphamphu ukushisa is nendawo kahle ubukhulu pool, uma izinga lokushisa oyifunayo kufinyelelwe uzophiwa ngokuzenzakalelayo silondoloze ukuthi lokushisa zonke ngenyanga eside.
Ugesi, udayiswa ngumnikezeli a kilowatt-hour iyunithi ngokuthi. Omunye-hora kilowatt ilingana 3412 BTU. BTU imele Unit Thermal British. Kuyinto iyunithi yokulinganisa ukuthi abanye abakhiqizi impompi yokushisa zisebenzisa okukhethile yabo.
COP imele Coefficient ukusebenza isb. Isilinganiso kwamandla okukhiphayo amandla okokufaka. Lokhu kuncike ambient air lokushisa kanye nezinga lokushisa elizosetshenziswa amanzi echibini lokubhukuda. It ikutshela kuhle kwegezi isilinganiso kwe-futha ukushisa.
Njengazo zonke yokubhukuda Ukushisa izinhlelo wena belulekwa ukuba usebenzise ikhava wokungifaka echibini, nxa swimming pool akusetshenziswa. Lokhu kuyogcina ukuhwamuka (kufike komkhulu wabo nokushisa) amancane futhi ngakho ukunciphisa jikelele pool Ukushisa izindleko nokukhungatheka engadingeki. A ikhava pool usike Imininingwane ukushisa ukulahlekelwa ngu-50% kuya ku-95%.
Aquark sika ukushisa amaphampu kukhona zamukele phezulu izingxenye izinga, ngisho ngaphandle khotha yesondlo, ichibi impompi yokushisa ihlala kalula iminyaka engu-10 kuya ku-20. Kodwa, maqondana nesondlo ezinhle, pool ukushisa yethu yepompo ngokoqobo eziyohlala phakade.
Izinsika Main entsha EU F-negesi Imithetho kukhona ukwehlisa kwekhabhoni futhi iphokophele aphansi GWP izixazululo. Lokhu kuhilela lwesigaba phansi ukusetshenziswa HFCs kanye nokwehlisa 37% ngo-2020 futhi u-79% ngo-2030 ngu-2025 Single Split A / C izinhlelo angaphansi 3kg refrigerant icala kufanele ibe refrigerant nge GWP.
R32 has ezifanayo ukusebenza ingcindezi ukuze R410A azungeze 12-26 Bar (174-377 Psi) Nokho R32 has ikhono elingcono ukushintshashintsha ukushisa-umthwalo kuka R410A azikhulule umthamo ephakeme kunaleyo R410A ekwenzeni izinhlelo kahle.
R32 has a GWP ngaphansana R410 bese isebenzisa 30% ngaphansi refrigerant kwenkokhiso ukukhiqiza i alinganayo umthwalo umthamo. Ngenxa yalokho inani CO2 ekushayweni zingancishiswa ngu azungeze 77%.
Ngokuvamile the ephansi GWP ayanda ezingeni flammability, R32 alihlukile. R32 iye yanikezwa A2L Ukwahlukanisa futhi libhekwa oluvuthayo isigaba A2. Ukwahlukanisa ukuba siqondiso 67/548 / EEC & 1999/45 / EC: F +; R12 kakhulu oluvuthayo. Ngakho kuphela okwehlela abantu wayala kahle kufanele ukusingatha amagesi ngaphansi kwengcindezi.
I-Aquark yinkampani esebenzayo ekhethekile ocwaningweni, ekuthuthukiseni nasekwenziweni kwamaphampu okushisa echibi lokubhukuda. Singumqambi wezobuchwepheshe i-InverPad zamaphampu okushisa.
Keyuan ababili Road, Gaoli Development Zone, Ronggui, Shunde District, Foshan, PRChina 528306